Izici Zonke Uhlelo Lokulawulwa Kokuqukethwe Okufanele Zibe Nakho Ukuze Kusetshenziselwe Injini Yokucinga | Martech Zone
Ngihlangane neklayenti ebelokhu lilwa namazinga ezinjini zalo zokusesha. Njengoba ngibuyekeza eyabo Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe (CMS), ngibheke imikhuba emihle eyisisekelo engingayitholi. Ngaphambi kokuthi nginikeze uhlu lokuhlola lokuqinisekisa nomhlinzeki wakho we-CMS, kufanele ngiqale ngisho ukuthi asikho neze isizathu sokuba inkampani HHAYI iphinde ibe nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe.
I-CMS izokunikeza wena noma iqembu lakho lokumaketha ukuthi niguqule isayithi lakho endizeni ngaphandle kwesidingo sonjiniyela wewebhu. Esinye isizathu esenza ukuthi i- Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe isidingo iningi lazo lisebenzisa imikhuba emihle yokwenza indawo yakho isebenze kangcono.
Ama-purists we-SEO angahle aphikisane nezinye zezici engizixoxa lapha ngoba kungenzeka zingasho ngokuqondile ukuthi zibekwa ezingeni. Ngingaphikisana nanoma iyiphi i-Search Engine Guru, noma kunjalo, ukuthi isikhundla sezinjini zokusesha simayelana nokuhlangenwe nakho komsebenzisi - hhayi ama-algorithms enjini yokusesha. Uma udizayina kangcono isayithi lakho, utshala imali kokuqukethwe okuhle, ukukhuthaza lokho okuqukethwe, futhi uzibandakanya nabasebenzisi bakho… iba ngcono isiza sakho lapho sizokwenza amazinga okusesha we-organic.
Imishini ye- ukuthi abakhasi benjini yokusesha bathola kanjani, izinkomba, kanye nezingaindawo yakho ayikashintshi kangako eminyakeni edlule… kepha ikhono lokuheha izivakashi, lezo zivakashi zabelane ngokuqukethwe kwakho, futhi izinjini zokusesha ziphendule ngokushintshile. I-SEO enhle iyi isipiliyoni esihle somsebenzisi… Futhi uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe lubalulekile empumelelweni yakho.
Izici Zokulawulwa Kwe-SEO
Njalo Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe kufanele noma isetshenziswe ngalezi zici ezilandelayo:
Izipele: Izipele ne-SEO? Kulungile… uma ulahlekelwa isayithi lakho nokuqukethwe, kunzima ukulinganisa. Ukuba nesipele esiqinile esinezipele ezengeziwe kanye nokufunwayo, izipele ezingekho kusayithi nokubuyisa kusiza kakhulu.
Imvuthuluka yesinkwa: Uma unolwazi oluningi oluhleleke ngokulandelana, amandla wabasebenzisi (nezinjini zokusesha) ukuqonda ukuthi isigaba sabaphathi sibaluleke kakhulu ekutheni bakubheka kanjani okuqukethwe kwakho futhi bakukhombe kahle.
Izaziso zesiphequluli: I-Chrome ne-Safari manje zinikeza izaziso ezihlanganisiwe ngezinhlelo zokusebenza. Lapho othile efika kusayithi lakho, bayabuzwa ukuthi bangathanda ukwaziswa lapho okuqukethwe kubuyekezwa. Izaziso zigcina izivakashi zibuya!
I-CachingNgaso sonke isikhathi lapho kucelwa ikhasi, ukubheka i-database kubamba okuqukethwe bese kuhlanganisa ikhasi. Lokhu kuthatha izinsizakusebenza nesikhathi… isikhathi esilimaza ukusebenza kahle kwenjini yakho yokusesha. Ukuthola i-CMS noma ukusingathwa ngamandla wokugcina isikhashana kungukhiye wokusheshisa isiza sakho nokunciphisa izinsizakusebenza ezidingekayo kwiseva yakho. Ukulondolozwa kwesikhashana kungakusiza futhi lapho uthola ukuhlaselwa komgwaqo… amakhasi alondoloziwe kulula ukuwanikeza kunamakhasi angagciniwe. Ngakho-ke ungathola izivakashi eziningi kakhulu kunalokho ongakuthola ngaphandle kokulondolozwa kwesikhashana.
Ama-URL we-Canonical: Kwesinye isikhathi amasayithi akhishwa ngekhasi elilodwa elinezindlela eziningi. Isibonelo esilula isizinda sakho kungenzeka ukuthi sinaso http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Lezi zindlela ezimbili eziya ekhasini elifanayo zingahlukanisa isisindo sezixhumanisi ezingenayo lapho ikhasi lakho lingabekwanga kahle futhi ngendlela elingaba ngayo. I-URL ye-canonical isiqeshana esifihliwe sekhodi ye-HTML esitshela izinjini zokusesha ukuthi iyiphi i-URL okufanele basebenzise kuyo isixhumanisi.
Amazwana: Amazwana engeza inani kokuqukethwe kwakho. Vele uqiniseke ukuthi ungalinganisa ukuphawula njengoba kunethoni lama-bots laphaya agaxekile amapulatifomu we-CMS ukuzama ukukhiqiza izixhumanisi.
Isihleli Sokuqukethwe: Isihleli sokuqukethwe esivumela i-H1, i-H2, i-H3, iqinile futhi omalikhi ukuthi kusongwe ngombhalo. Ukuhlelwa kwesithombe kufanele kuvumele izinto ze-ALT ukuthi ziguqulwe. Ukuhlelwa komaki we-anchor kufanele kuvumele ukuhlelwa kwento ye-TITLE. Kuyishwa ukuthi zingaki izinhlelo ze-CMS ezinabahleli bokuqukethwe abampofu!
Ukunikezwa kwenethiwekhi yokuqukethwe: A inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe iyinethiwekhi yamakhompiyutha atholakala ngokwendawo egcina izinsiza ezimile endaweni… okuvumela amakhasi ukuthi alayishe ngokushesha okukhulu. Futhi, lapho i-CDN isetshenziswa, izicelo zakho zekhasi zingalayisha izimpahla kusuka kuseva yakho yewebhu KANYE ne-CDN yakho ngasikhathi sinye. Lokhu kunciphisa umthwalo kuseva yakho yewebhu futhi kwandisa ijubane lamakhasi akho kakhulu.
Ukusingathwa Kokusebenza Okuphezulu: Ijubane liyikho konke uma kukhulunywa ngezinjini zokusesha. Uma uzama ukonga imali ethe xaxa ekusingatheni, ubhubhisa ngokuphelele ikhono lakho lokukhonjwa futhi libekwe kahle ezinjinini zokusesha.
Ukuminyaniswa kwesithombe: Izithombe zivame ukuthunyelwa kumafayili amakhulu angenasidingo. Ukuhlanganiswa nethuluzi lokucindezelwa kwesithombe ukunciphisa usayizi wefayela nokwenza usayizi wezithombe ukuze ubukwe kahle kubalulekile.
Ukuhlanganiswa: Amandla wokwandisa ukusebenza kokuqukethwe kwakho ngokukhiqiza okuholayo, ukumaketha nge-imeyili, ukumaketha okuzenzakalelayo, ukumaketha imithombo yezokuxhumana, namanye amapulatifomu akusiza ukuthi uthole futhi ugcine ithrafikhi.
Izithombe Ezivilaphayo: Izinjini zokusesha zithanda okuqukethwe okude okunemidiya eminingi. Kepha ukulayisha izithombe kunganciphisa isiza sakho ekukhangeni. Ukulayisha okuvilaphayo kuyindlela yokulayisha izithombe ngenkathi ikhasi liskrolwa. Lokhu kuvumela ikhasi ukuthi lilayishe ngokushesha okukhulu, bese libonisa kuphela izithombe lapho umsebenzisi efika endaweni akuyo.
Ukuhola Abaholi: Ngemuva kokuthi abakwa-prospects bathole i-athikili yakho, baxhumana kanjani nawe? Ukuba nabaqambi bamafomu kanye ne-database yokubamba imikhondo kufanele.
Izincazelo zeMeta: Izinjini zokusesha zivamise ukuthwebula incazelo ye-meta yekhasi bese zibonisa ukuthi ngaphansi kwesihloko kanye nesixhumanisi ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha. Uma ingekho incazelo ye-meta, izinjini zokusesha zingabamba umbhalo ngokungahleliwe kusuka ekhasini… umkhuba ozokwehlisa amanani akho wokuchofoza kuzixhumanisi zakho kuzinjini zokusesha futhi kungalimaza nenkomba yekhasi lakho. I-CMS yakho kufanele ikuvumele ukuthi uhlele incazelo ye-meta ekhasini ngalinye lalelo sayithi.
HambayoUkusesha kweselula kuqhuma ekusetshenzisweni njengoba ama-Smartphones namaphilisi amukelwa kuyo yonke indawo. Uma i-CMS yakho ingakuvumeli iwebhusayithi ephendulayo esebenzisa i-HTML5 ne-CSS3 (inketho engcono kunazo zonke)… noma okungenani iqondise kabusha kuthempulethi yeselula elungiselelwe kahle, umane ngeke ubalwe kusesho lweselula. Ngokwengeziwe, amafomethi amasha eselula afana ne- AMP kungenza okuqukethwe kwakho kubekwe kahle kusesho olwenziwe kusuka kumadivayisi we-Google.
Amapayipi: Uma ushicilela okuqukethwe kwakho, i-CMS kufanele ihambise isayithi lakho ku-Google naku-Bing ngaphandle kokungenelela. Lokhu kuzoqala ukukhasa okusuka enjini yokusesha futhi kutholakale okuqukethwe kwakho okusha (noma okuhlelile) okuhlanganiswe kabusha yinjini yokusesha. Izinjini ze-CMS eziyinkimbinkimbi zizoPing izinjini zokusesha lapho kuhlelwa okuqukethwe.
Ibuyisela kabusha: Izinkampani zivame ukushintsha futhi zakha kabusha amasayithi wazo. Inkinga yalokhu ukuthi injini yokusesha kungenzeka isakhomba i-URL ekhasini elingekho. I-CMS yakho kufanele ikuvumele ukuthi ubhekise ithrafikhi ekhasini elisha bese uqondise kabusha injini yokusesha lapho futhi ukuze bathole futhi bakhombe ikhasi elisha.
Amazwibela AcebileIzinjini zokusesha zinikela ngamafomethi we-microdata wokuhlonza i-pagination kanye ne-breadcrumb ngaphakathi kwesiza sakho. Imvamisa, le markup idinga ukusetshenziswa ngaphakathi kwetimu oyisebenzisayo nge-CMS yakho noma ungathola amamojula akuvumela ukuthi uyisebenzise kalula. Amazwibela acebile njenge-Schema ye-Google ne-OpenGraph ye-Facebook ithuthukisa imiphumela yenjini yokusesha nokwabelana futhi izoshayela izivakashi eziningi ukuthi zichofoze.
robots.txt: Uma uya empandeni (ikheli lesisekelo) lesizinda sakho, engeza robots.txt ekhelini. Isibonelo: http://yourdomain.com/robots.txt Ingabe kukhona ifayela lapho? Ifayela le-robots.txt yifayela lezimvume eziyisisekelo elitshela i-injini yokusesha i-bot / spider / crawler ukuthi yiziphi izinkomba ezingazinakwa nokuthi yiziphi izinkomba okufanele zikhase. Ngaphezu kwalokho, ungangeza isixhumanisi kumephu yakho yesayithi kuyo!
Okuphakelayo kwe-RSS: Uma unezinye izakhiwo futhi ufuna ukwazisa ibhulogi yakho, ukuthola ama-RSS feeds wokushicilela kalula izingcaphuno noma izihloko kumasayithi angaphandle kuyisidingo.
Ukucinga: Ikhono lokusesha ngaphakathi nokukhombisa imiphumela efanelekile kubalulekile kubasebenzisi ukuthola imininingwane abayifunayo. Amakhasi wemiphumela yenjini yokusesha avame ukuhlinzeka ngenkambu yesibili yabasebenzisi bosesho ukuthi nabo baseshe ngaphakathi kwesiza!
Ukuphepha: Imodeli yokuphepha eqinile kanye nokusingathwa okuphephile kuzovikela isiza sakho ekuhlaselweni noma ekubekweni kwekhodi enonya kuso. Uma isiza sakho sithola ikhodi enonya kuso, iGoogle izokukhomba futhi ikwazise uma kuqhathaniswa ne-Webmasters. Kubalulekile ukuthi ube nohlobo oluthile lokuqapha noma ukuphepha okuhlanganiswe ku-CMS yakho noma kwiphakheji yakho yokubamba kulezi zinsuku.
Ukushicilelwa Komphakathi: Amandla wokushicilela ngokuzenzakalela okuqukethwe kwakho ngezihloko nezithombe ezenzelwe kahle kuzokwabelana ngokuqukethwe kwakho. Okuqukethwe okwabiwe kuholela ekubalweni kokuqukethwe kwakho. Ukushiwo kuholela kwizixhumanisi. Futhi izixhumanisi ziholela ekulinganisweni. I-Facebook iphinde yethule ama-Instant Articles, ifomethi yokushicilela wonke ama-athikili ngqo emakhasini omkhiqizo wakho.
Ukuthengiswa: Ngenkathi abantu abafunda okuthunyelwe kwabafundi be-RSS bewe kakhulu eceleni esikhundleni sokwabelana ngomphakathi, amandla okuhlanganisa okuqukethwe kwakho kumasayithi namathuluzi asabalulekile.
UkumakaIzinjini zokusesha zikushaya indiva umaki we-meta wamagama asemqoka, kepha ukumaka kusengasebenza kahle - uma kungenjalo okunye okufanele kukhunjulwe amagama asemqoka owabhekise ekhasini ngalinye. Amathegi avame ukusiza ukuthola nokuveza okuthunyelwe okufanele nemiphumela yosesho ngaphakathi kwesiza sakho.
Isihleli Sesifanekiso: Isihleli sethempulethi esiqinile esivikela noma yikuphi ukusetshenziswa kwamatafula e-HTML futhi sivumele i-Nice HTML ehlanzekile futhi sinamathisele amafayela we-CSS ukufometha kahle ikhasi. Kufanele ukwazi ukuthola nokufaka amathempulethi ngaphandle kokwenza intuthuko ebalulekile kusayithi lakho ngenkathi ugcina okuqukethwe kwakho kungenazinkinga.
I-XML Sitemaps: Imephu yesayithi ekhiqizwe ngamandla iyinto esemqoka enikezela izinjini zokusesha nge imephu ukuthi okuqukethwe kwakho kukuphi, kubaluleke kangakanani, nokuthi kugcine nini ukuguqulwa. Uma unesayithi elikhulu, amamephu wakho wesayithi kufanele acindezelwe. Uma imephu yesayithi idlula i-1Mb, i-CMS yakho kufanele ikhiqize amamephu esayithi amaningi bese iwaxhuma ndawonye ukuze injini yokusesha ikwazi ukuwafunda wonke.
Ngizophuma ngomlenze lapha bese ngiyasho; uma i-ejensi yakho ikukhokhisela izibuyekezo zokuqukethwe futhi awunakho ukufinyelela ohlelweni lokuphathwa kokuqukethwe ukuze ulungiselele isayithi lakho… sekuyisikhathi sokushiya leyo nhlangano futhi uzitholele entsha enokuqina uhlelo lokuphatha okuqukethwe. Ama-ejensi kwesinye isikhathi akha amasayithi ayinkimbinkimbi futhi akudinga ukuthi ushintshe izinguquko zokuqukethwe njengoba uzidinga… ezingamukeleki.
Tags: ampcms lokhomicodataamazwibela acebilerobots.txtukusebenzisa ngokugcwele injiniseouhlu lokuhlolaIbalazwei-wordpress seoxml imephu yesayithi
Nov 13, 2010 ngo-12: 37 PM
Ini? Azikho izincomo ezithile? Inkampani yazi kanjani ukuthi iyiphi i-CMS abayidingayo noma ukuthi isisombululo sizoqina kanjani. Uhlu oluhle, Mnu Karr.
UScott Armstrong MBA
Mar 20, 2011 ku-4: 28 AM
Thanda lolu hlu! Lesi manje yisiqondiso sami njengoba ngiqala ukuyothenga i-CMS. Bengilokhu ngenza yonke i-web design, kepha ngifuna ukunciphisa isikhathi engisichitha ukubhala ikhodi ukuze ngikwazi ukwandisa isikhathi engisichitha ekuhleleni iwebhusayithi. Ngabe unezincomo ezinhlelweni ezijwayelekile ze-DIY (WordPress, Joomla, njll.)?
I-Oct 8, i-2011 ku-6: i-43 PM
Leyo URL iyasebenza, isivakashi. Kodwa-ke, i-CMS enhle izobamba / ithumele imephu yakho yesayithi njalo lapho ushicilela okuqukethwe!
I-Oct 8, i-2011 ku-6: i-45 PM
Ukuphela kwento engingayengeza kulokhu manje ukuthi ipulatifomu yokubhuloga kufanele ibonise kahle amathegi we-rel = ”author” futhi ivumele ukuxhumana kuphrofayela ye-Google ukuze izithombe zombhali zivele emiphumeleni yosesho.
I-Oct 8, i-2011 ku-10: i-38 PM
Ngivuma ngokuphelele - Ayikho inkampani okufanele ibe yi-CMSless.